News | money
News | Tag: money
मुद्रा कोष र इक्वेडरबीच चार अर्ब डलरको सम्झौता
वासिङ्टन ।अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले इक्वेडरको आर्थिक नीतिमा मद्दत गर्नेगरी आगामी तीन वर्षका लागि चार अर्ब २० करोड डलर उपलब्ध गराउने भएको छ ।
लाखौं ठगेर व्यापारी फरार भएपछि...
पोखरा । महानगरले पोखराको विभिन्न ठाउँमा पार्किङस्थल बनाउने योजना बनाएको छ । पोखराको प्रदर्शनी केन्द्र नजिकै केही दिन अघि बालुवा डिपो देखिन्थ्यो । महानगरले सडक व्यवस्थापन गर्ने भन्दै उक्त ठाउँको ‘बालुवा हटाउनू’ भन्दै पत्र काट्यो । अहिले उक्त ठाउँको बालुवा हटिसकेको छ । तर उक्त जग्गाको विवाद भने बढेर गएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गामा व्यापार गर्न २ जनाले सहमति गरेका थिए ।
हनिमुनलाई कसरी यादगार बनाउने !
हनिमुनलाई विवाहपछिको सबैभन्दा स्मरणीय र रोमाञ्चक पल मानिन्छ । यो रोमाञ्चक पललाई विवाहिता नवदम्पत्तीहरुले यादगार बनाउने प्रयास गर्छन् ।
यदी कसैले तपाईको पैसा फिर्ता गरिरहेको छैन या बिनाकारण तपाईलाई दुःख दिइरहेको छ भने अथवा कुनै मानिसबाट तपाईलाई समस्या भैरहेको छ भने तपाईले नरिवलको यो सजिलो तरिका अपनाएमा दुश्मनबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
भूकम्पपीडितलाई तेस्रो किस्ता वितरण
पर्वत । भूकम्पले क्षति पु¥याएर नयाँ घरनिर्माण गरेका यहाँका लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता वितरण गर्न थालिएको छ ।
जब यी राष्ट्रपतिहरुले ब्रह्मलुट गरे
व्यापारीसँग एक लाख घुस लिने प्रहरी हवल्दार पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक लाख रुपैयाँ घुससहित नेपाल प्रहरीका एक जना हवल्दारलाई पक्राउ गरेको छ । आयोगको हेटौंडाको टोलीले टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका हवल्दार सुदामा हजरालाई एक लाख रुपैयाँ घुससहित शुक्रबार पक्राउ गरेको हो।
पैसा बचाउने हो ? यी सामान्य लाग्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्